Inona no atao hoe Calculator lehibe ao amin'ny Windows 10, Microsoft?
Nanomboka ny Microsoft Octobre 2018 fanavaozam-baovao momba ny Windows 10 tamin'ny 2 2018 tamin'ny XNUMX saingy nametrahany izany fanavaozana ny tanana amin'ny dikan-teny vaovao.
Ireo mpampiasa sy mpitantana izay efa niakatra tamin'ny dikan-teny vaovao efa, Vakio ny antony ahafahanao miandry amin'izany, dia mety nahamarika fiovana maromaro nampidirin'i Microsoft.
Ireo izay mampiasa ny Calculator dia mety ho tohina noho ny haben'ny Calculator amin'ny dikan-teny vaovao an'ny Windows 10.
Ny kalkulator dia maka ny ankamaroan'ny efijery rehefa navoaka voalohany. Ny screenshot etsy ambany dia maneho izany rehefa vita ny fanentanana amin'ny 1920 × 1080 monitor amin'ny solosaina Windows 10 version 1809.
Na dia mety hiasa amin'ny toe-javatra sasany aza ny habeny, rehefa manokatra ny kalkulator ianao ary tsy misy zavatra hafa na manana fitaovana mampihetsi-po sy ny efijery kely, dia tsy mahomby amin'ny ankamaroan'ny sehatra.
Raha tianao ny hampiseho ny kalkulator eo akaikin'ny programa iray hafa, dia lazao ny takelaka Excel, tranokala iray na dokam-barotra iray, dia ho hitanao fa mety tsy miara-miasa amin'ny habaka interface izany.
Tsy nanao fahadisoana tahaka izany i Microsoft tamin'ny famoahana ny rafitra operating Windows 8. Ny rafi-pandrafetana dia tsy nanana safidy hanatsarana ny rindrankajy fanentanana rehefa natomboka izany, ka midika izany fa ianao dia mipetraka amin'ny rindranasa manokana iray na apps feno manontolo andro.
Ireo Windows 10 mpampiasa tsy mankasitraka ny haben'ilay interface amin'ny Calculator dia afaka manova azy tsara. Ampifanitsio fotsiny ny cursor amin'ny totozy amin'ny iray amin'ireo varavarankely ary ampiasao ny movansy fitifirana hanova azy.
Raha manova ny interface ianao, dia ho hitanao fa miafina ao amin'ny interface ny sehatra Memory and History ary nosoloina sary miafina ahafahanao manetsika ny tantara.
Ny Calculator dia mahatsiaro ny haben'ny varavarankely vaovao, amin'ny fomba fisaorana, mba ho entina miaraka amin'ireo sainam-baovao vaovao isaky ny manomboka izany amin'ny rafitra.
Tsy fantatra hoe nahoana i Microsoft no nanapa-kevitra ny hampakatra ny efijery amin'ny app ny Calculator amin'ny dikan-teny vaovao an'ny Windows 10. Ny apps hafa dia tsy nahazo ny fitsaboana mitovy amin'ny Windows 10 vaovao.
Izao ianao: Inona no entinao amin'izany?
The lahatsoratra Inona no atao hoe Calculator lehibe ao amin'ny Windows 10, Microsoft? niseho voalohany tamin'ny gHacks Technology News.
Download ny rafitra coolpad
Microsoft hanohana Skylake amin'ny Windows 7 sy 8.1
Acer's Windows Miara-mamolavola Development Kit nanomboka nandefa ity volana ity
MediCat DVD: bootable toolkit miaraka amin'i Windows 10 WinPE
Ahoana ny fomba hanavaozana an'i Cortana ao amin'ny Windows 10 (azonao atao ny miantso azy hoe 'Siri' raha tianao!)
Hanafoana ny Windows Free 10 Upgrade ankehitriny i Microsoft
Ahoana no mba ahafahana manavotra ny tontolon'ny fiara mandeha aorian'ny Windows 10 1809 Update
Ahoana ny fampiasana BlueScreenView amin'ny Windows 10
Windows 10 Redstone 3 hamorona fiteny fanoratana vaovao, "Project NEON" no anarana nomeny
Tags:Calculator Calculator (Windows) Microsoft Fampahafantarana software mandresy 10 1809 Windows 10
Ubuntu 16 USB HTTPS ram famotsorana "PC Company bilaogy WordPress PPA raki-daza MAMAKA windows update web browser PHP takelaka fikirakirana loharano misokatra Windows Phone Performance afa-po API Firefox Unité centrale finday avo lenta Bing taona Fitaovana finday ubuntu 15.04 Samsung Time Facebook Linux Google File Screen Ubuntu Chrome fikarohana Apple Watch fitaovana finday Command Up " Users Database rindrambaiko Nginx haino aman-jery sosialy rafitra SSH fitaovana Ubuntu 14.04 Support app store famerenana Windows One ' hametraka Plugin Windows 10 'App Twitter GNOME CentOS Windows 8 fitaovana YouTube web server Malagasy Bible MySQL command line Phone Android OS X Apps endri-javatra Cortana toe-tsaina lalao Linux Mint iPhone vaovao farany paoma nbsp Microsoft Windows Linux Ubuntu Systems Rafitra fikirakirana SSD IP adiresy fanamarinana HTTP Samsung Galaxy 10 HTML Ubuntu 14.10 lalao PDG Debian Microsoft fifamoivoizana Toetoetra tahirin-kevitra SEO Plugins CentOS 7 fitaovana Video bilaogy Apache 04 Unix Server